Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Ukutshona kwelanga kweHawaii Mhle kodwa ayisiyiyo eyona ilungileyo?
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseGrisi zokuPhula • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Uphononongo lujonge inani lamanqaku okuhamba kunye neeblogi ezincomela indawo ekuyiwa kuyo, inani lezithuba ze-Instagram kunye nenqanaba longcoliseko olubangelwa kukukhanya okungeyonyani.
Isifundo esitsha sityhila iindawo ezintle zokutshona kwelanga kwihlabathi liphela.
Uninzi lweendawo ezilungileyo kakhulu zokutshona kwelanga eUnited States zifumaneka eHawaii.
Indawo ekuye yagqama ngakumbi kunayo nayiphi na enye sisiqithi saseGrisi iSantorini.
Ngothintelo lokuhamba luthamba kancinci, uphando olutsha lubonisa ezona ndawo zintle zokutshona kwelanga kwihlabathi liphela kwaye Hawaii yeyona ndawo ilungileyo yesi-3.
Olu phononongo lujonge inani lamanqaku okuhamba kunye neeblogi ezincomela indawo ekuyiwa kuyo, inani lezithuba ze-Instagram kunye nenqanaba lokungcoliseka kwendalo okubangelwe kukukhanya okungekuko kwindawo nganye ukubanika amanqaku okutshona kwelanga ngaphandle kwe-10.
Iindawo ezi-10 eziphambili zokushona kwelanga kunye nokuphuma kwelanga
Uhlu Indawo ilizwe Inani lamanqaku / iibhloko Ilanga le-Instagram posts Ukuphuma kwelanga kwi-Instagram posts Ukudibana kokutshona kwelanga kunye nokuphuma kwelanga kwi-Instagram posts Ukuqaqamba (mcd / m2) Amanqaku okutshona kwelanga
1 Santorini Grisi 12 105,692 2,417 108,109 0.627 8.29
2 Bali Indoneshiya 5 154,376 20,590 174,966 0.216 7.13
3 Hawaii eunited States 5 113,666 20,869 134,535 0.179 6.62
5 Ipaki yeSizwe yaseGrand Canyon eunited States 7 8,163 3,319 11,482 0.173 5.65
6 Angkor Wat Khambodiya 6 1,960 21,943 23,903 0.268 5.49
8 Maldivs Maldivs 6 16,026 1,190 17,216 0.916 5.27
9 Haleakalā eunited States 4 10,086 33,049 43,135 0.175 5.15
10 Uluru Ostreliya 4 16,676 9,056 25,732 0.172 4.93
Indawo eyayiqaqambile ngaphezu kwayo nayiphi na indawo yayisisiqithi saseGrisi iSantorini, ekucingelwa ukuba sesona siqithi sihle kwiziqithi ezincinci zeli lizwe, ezaziwa ngamatye aphakamileyo naziimhlophe ezimhlophe kunxweme loLwandle iAegean.
I-Santorini yacetyiswa kumanqaku angaphezulu lee kunayo nayiphi na enye indawo esiyijongileyo kwaye nayo ayinangxaki kukungcoliseka kokukhanya njengezixeko ezikhulu, ngokuqaqamba kwe-0.627 mcd / m2.
Indawo yesibini efanelekileyo yokuya esibhakabhakeni liBali eIndonesia. I-Bali ineelwandle ezininzi kunxweme olusentshona ezinje ngeJimbaran Beach apho ungabukela khona ilanga litshona ngotywala okanye ukuluma ukutya kwindawo enye yolwandle kunye neeresityu njengoko ilanga liwela ngasemva kolwandle.
Uninzi lokutshona kwelanga okuhle eUnited States kunokufumaneka eHawaii, kubandakanya nepaki yesizwe iHaleakalā, kodwa Aloha Urhulumente ukwayikhaya kwezinye iilwandle ezilungileyo kwihlabathi kwaye uza kwindawo yesithathu kuphando. Isanti emhlophe ekhazimlayo yokuthandwa koNxweme lwaseKohala ilungele ukubukela uLwandlekazi lwePasifiki lujika lube yimibala eqaqambileyo epinki, emthubi, kunye neorenji.